Izithombe ezishaqisayo zikhombisa umthelela wokufudumala kwembulunga yonke e-Arctic | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Timo Lieber
El I-Arctic Yisinye sezifunda zomhlaba esihlupheka kakhulu ngemiphumela yokushisa komhlaba. Isibonelo ukulahleka kweqhwa okwenziwe ezikhathini zamuva ngenxa yamazinga okushisa anyukayo: EGreenland iyodwa, kulahleke ama-gigaton amathathu eqhwa ngo-3000.
Manje, umthwebuli wezithombe waseBrithani uTimo Lieber, uchwepheshe wokuthatha izithombe zasemoyeni, usisondeza kuleli qiniso elibi.
Lesi sithombe, esingasikhumbuza kahle iso lomuntu, siyisibonakaliso nje sokuthi kunezinto esingazenzi kahle. Izinga lokushisa e-Arctic liphakeme ngama-2 degrees kunokujwayelekile, okungase kungabonakali njengokuningi kithina, kepha empeleni kungaphezu kokwanele ukuthi iqhwa lisuke ekwakheni ipulatifomu emhlophe eqinile, lincibilike libe yimifantu.
KuLieber, lesi isithombe sakhe asithandayo, ngoba kubonakala sengathi leli "iso" lisibheka lizibuza ukuthi senzani.
Nakhu okwenzekayo njengoba iqhwa liba buthakathaka: iziqephu ezincane zakha, ngaphandle kwalapho izimo zishintsha, ziyancibilika, okukhuphula amazinga olwandle emhlabeni jikelele okudala izikhukhula ogwini naseziqhingini eziphansi.
Yize amachibi emangalisa, iqiniso lokuthi aqala ukuba khona e-Arctic alikhathazi thina kuphela abantu, kodwa nezilwane ezihlala lapho, njengamabhere asezindaweni ezibandayo. Lezi zilwane ezincelisayo, ziphume ebusika, zidinga ukwazi ukuhamba endaweni eqinile ukuze zizingele izilwane zazo.
Njengoba ukufudumala kwembulunga yonke kuba kubi, amabhere asezindaweni eziphakeme anezinkinga eziningi ukuthola nokufuna ukudla kwazo.
Izithombe, ezingaqondakali ngamabomu, kufanele zibonise okwenzekayo e-Arctic.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izithombe » Izithombe ezishaqisayo zibonisa ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke kuyithinta kanjani i-Arctic
Impungushe efriziwe itholakala eJalimane ngenxa yegagasi elibandayo